အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့
သင်ဒီမှာရှိပါတယ်: နေအိမ် ကိုယ်ဝန် အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့
အမျိုးသမီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လေးအတွက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ fallopian tubes fertilization ၌ရှိ၏, သူတို့ Ovary ကနေမျိုးဥကိုလက်ခံရရှိသောကြောင့်,, နှင့်သုက်ပိုးကိုထိုးဖောက်ဖို့. Zygote, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ဆဲလ်များ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့, ထိုသားအိမ်လိုင်သို့ဆငျးသ, ထိုသို့မြို့ရိုးကိုတွဲသည်အဘယ်မှာရှိ. ဒီရောဂါဗေဒနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ဘဝအတှကျ, ယေဘုယျအားဖြင့်, ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုမတည်ရှိပါဘူး, ဒါပေမယ့် fallopian ပြွန်ထဲမှာအတားအဆီးရှာတွေ့ (ပင်အဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက်သည်း extensions တွေကို) может помешать процессу зачатия нормально протекать.
အ fallopian ပြွန်ထက်ပို၏အကြောင်းတရားများအပိတ်အဆို့:
အ fallopian ပြွန်ထဲမှာညင်သာပျော့ပျောင်းနှင့်ကင်ဆာ neoplastic ဖြစ်စဉ်များ.
အ fallopian ပြွန်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိမွေးရာပါကွဲလွဲချက်များ.
အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့: ရောဂါလက္ခဏာ.
မကြာခဏဆိုသလိုဒီရောဂါဗေဒတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့stёrtuyuရှိပါတယ်. အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့, ရောဂါလက္ခဏာ, у которой нечётко выражены, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Non-ကိုယ်ဝန်အတွက်ရာသီကာလ၏မရှိခြင်း, သူကထိုမိန်းမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရသာမအောင်မြင်ကြိုးစားမှု၏နံပါတ်ပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်နှောက်ယှက်ဖို့အစပြု. သာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤကဲ့သို့သောအရိပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်, အနိမ့်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာမှုများထပ်တလဲလဲနာကျင်မှုကိုအဖြစ်, တစ်ဦးဆွဲဇာတ်ကောင်ရှိခြင်း. သင်တို့သည်လည်းရာသီကာလအတွင်းနာကျင်မှုကိုခံစားရစေခြင်းငှါ, အပေါများအဝါရောင်ရိနာစွဲ, နှင့်အီနှင့်နာကျင်မှုမှတပါးလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း.
ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏စေ့စေ့စပ်စပ်စုဆောင်းပြီးနောက်, ရောဂါအတည်ပြုရန်မှရောဂါရှာဖွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်စတင်. အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အခြေခံနည်းလမ်းများ:
အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့၏ကုသမှု.
အ fallopian ပြွန်၏အပိတ်အဆို့၏ကုသမှုအဓိကအားဒီရောဂါဗေဒအပြေးဘယ်လောက်ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, သူမနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၏ဇာတ်ကောင်စေကြပြီရသောအကြောင်းရင်း. အချို့ကိစ္စများတွင်ထိုသို့ဟော်မုန်းပုံမှန်နှင့်အလွန်အကျွံစိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်. ရောင်ရမ်းသောရောဂါများအတွက် antibacterial မူးယစ်ဆေးပြသထားတယ်, physiotherapy, နှင့်အချို့ကိစ္စခွဲစိတ်အတွက်. မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပထမဦးဆုံးသံသယရှိသူတုဗလအပိတ်အဆို့၏အသွင်အပြင်ကိုချက်ချင်းဆေးကုသမှုအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါသင့်တယ်.